Zụta umengwụ Heatless Ribbon Headband Hair Curling - Mbupu Na-akwụ ụgwọ & Enweghị |tụ | WoopShop®
:Dị: Bendy Rollers
Ọnụ ọgụgụ: 1pc
Emdị :dị: Umengwụ Curler
Agba: pink, acha anụnụ anụnụ, odo
Size: Curling iron length 1M / 39inch
Ntinye ntutu: All
Okpomọkụ Curling Rod Headband
Tinye mkpara curling gị n'isi dị ka a isi, ị nwere ike kechie ya n'elu ma ọ bụ dozie ya na a hairband dị ka a inyinya-agha, na mgbe ahụ kechie akọrọ ma ọ bụ ubé mmiri ntutu na n'akụkụ nke ọzọ nke curling band ma dozie ya na ntutu isi ala. Jide n'aka na ị ga-agbatị ma bido n'akụkụ elu isi gị. Ntutu isi nke nwere ike dịtụ ntakịrị n’ụbọchị ga-anọ otu awa ma ọ bụ abụọ, ma ọ bụ ntutu nke na-ete ntakịrị mmiri mmiri ma ọ bụ nkụ n’abalị.
Curling Ribbon agaghị emebi ntutu gị
Heatless curl ntutu rịbọn bụ inye gị ụzọ ọhụrụ nke ị na-agbagọ ntutu isi gị iji nweta curls mara mma na-enweghị etinye okpomọkụ na ntutu gị
Tupu ị lakpuo ụra n’abalị, gbanye ntutu gị na eriri a na-atụgharị ọnụ, kechie ntutu isi gị n’ogwe ụdọ abụọ ahụ, jikọta ya na bọtịnụ, ma kechie ya n’isi gị. Bilie n'ụtụtụ ma nwee ike ịgbanye curls dị ịtụnanya n'ejighị oge ọzọ.
Kwesịrị ekwesị maka iburu n'ụlọ ma ọ bụ na njem azụmahịa, na-adabara maka ntutu ntutu. Kwe ka inwee ntutu gbachapụrụ agbachapụ kwa ụbọchị.
Igwe na-enye ume ọhụrụ na nke okike bụkwa onyinye zuru oke, dabara adaba maka ezinụlọ, ndị enyi, na ndị ọrụ ibe nwere ntutu dị mma.
2x Mgbanaka ntutu
1x igwe na-agba agba
Otu esi eme ya:
Dabere na 21 nyocha
wie beschrieben, verrückt na wie alles geht!
Ezigbo Ogo, Ọrụ kacha elu
Akwa mma, daalụ
Ọ masịrị m na-ekele gị